Taiwan: Ireo Trano Ovni · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Novambra 2017 5:03 GMT
(Marihina fa tamin'ny 24 Febroary 2007 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
Sary avy amin'i CantikFoto
Misy trano tsy misy mipetraka ao Green Bay ao amin'ny faritr'i Taipei. Nantsoin'ny olona maro ao amin'io faritra io hoe ‘trano ovni’ izy ireo noho ny bika aman'endriny.
Araka ny voalazan'i Echo-Maan , izay mipetraka ao amin'io faritra io folo taona lasa izay, tany amin'ny 30 taona lasa tany no nanorenan'ny Tian Gong Industry Co. ireo trano mba ho toeram-pitsangatsanganana na trano fialan-tsasatra. Nanatontosa ny fetiben'ny mozika rock tany an-toerana ny YAMAHA nandritra ny fahavaratra manontolo raha mbola nalaza izy ireo tamin'izany.
Nilaza i Riverbank518 fa ‘tahaka ny tanàndehibe Plug-in izay naorin'i Archigram tany any amin'ny Fanjakana Britanika na ireo tranobe maoderina natsangan'ny Metabolisma tao Japana’ izy ireo.
Na izany aza, nilaza i Echo-Maan fa ‘tsy vita izy ireo, ary tsy misy mahalala ny namolavola azy. Mahery tokoa ny rivotra na dia manintona aza ny endrik'ilay toerana ary tsy afaka niaro loatra ireo mponina tamin'izany ny tranobe. Nilaozana ireo trano ny niafarany.
Na dia nilaozana aza ireo trano, manantena ny olona sasany ao an-toerana fa azo esorina izy ireo; mankafy ireo trano ireo noho ny endrika namolavolana azy kosa ny olona sasany any amin'ny firenena hafa . Na tahaka ny nosoratan'i Riverbank518 hoe “nilaozan'ny ‘extraterrestre” izy ireo.
Nosoratan'i mountaineer, nahitsin'i Portnoy. Samy mpikambana ao amin'ny Ekipan'ny Tetikasa GV Shinoa izy roa ireo